Sida loo Jumlada Back Up iPhone iMessages in Windows aan Lugood
iMessage waa codsi fiican in dhammaan dadka isticmaala iPhone. Waxaad u isticmaali kartaa si diro ama la helo fariimaha si xor ah, oo ay ku jiraan qoraalka, sawir, video, xiriirada, Email, links oo dheeraad ah, ilaa iyo inta aad ka yar tahay deegaanka shabakad. Si kastaba ha ahaatee, ha u malaynaysaa inaad weligaa oo arrintan ku saabsan, waxa aannu ku samayn karaa marka aan rabno in aan eegista dhaqaaqo iMessages kuwa kombiyuutaro our?
Sida loo iMessages ka iPhone wareejiyo PC / Mac sidii gurmad ah
Si iMessages ka iPhone wareejiyo computer Windows ama Mac OS eegista sida file a akhrin karo, Lugood caawin karin. Waxa aad u baahan yahay barnaamijka gurmad iMessage, sida Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) . Waxaad u isticmaali kartaa si aad u ogaato iyo gurmad xogta oo dhan ku iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, oo dhan iPad iyo iPod xiriiri 5/4 si aad u computer, oo ay ku jiraan iMessage oo dhan (text & warbaahinta). Sidee ayey u shaqeysaa? Aan isku dayaan in tallaabo hoos.
Tallaabada 1. Download oo ay maamulaan software on your computer
Fiiro gaar ah: Tilmaan-bixiyahan waxa uu ku salaysan yahay Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows). Haddii aad tahay user Mac ah, tallaabooyin dhab ahaan waa isku mid.
Burcad software on your computer ka dib ku rakibidda, ka dibna xiriiriyaan iPhone (qaataan iPhone 4 sida tusaale) si ay computer ka iyo waxaad heli doontaa suuqa kala ah sida soo socota. Bal aan ka bilowno ka soo kabsado Device macruufka.
Wixii iPhone 5 / 4s, iPad la isha bandhigay, mini iPad, iPod cusub iPad iyo taabashada 5:
Wixii iPhone 4 / 3GS, iPad iyo iPod 1 xiriiri 4: Waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo ka siib-in halkan.
Tallaabada 2. gala hab iskaanka qalabka iyo waxa laga baarayo u iMessage
Ka hor inta in aad iMessage, waxaad u baahan tahay in ay galaan hab iskaanka ah iPhone 4 / 3GS, iPad 1 ama iPod xiriiri 4 hore sida ay tallaabooyinka hoose si ay:
Hay iPhone oo guji badhanka Start.
Press Power oo Home badhamada aad iPhone waqti isku mid ah ee saxda ah 10 ilbiriqsi. Software tirin doonaa wakhti aad.
Marka 10 seconds maray, sii daayo batoonka, Laakiinse ay xajiyaan haysta button Home ah.
Haddii aad isticmaasho iPhone 5 / 4s, iPad la isha bandhigay, iPad mini, iPad cusub ama iPod xiriiri 5, waxaad si toos ah riixi kartaa Start Scan si ay u bilaabaan baar qalab aad u iMessages ku yaal.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha & gurmad iPhone iMessage aan Lugood
Marka scan ka baxayo, waxaad ku eegaan kartaa fariimaha helay on your iPhone ka hor soo kabashada. Si aad u hesho iMessages aad, waxaad dooran kartaa in calaamadee Messages "iyo Message Attchments, oo guji Ladnaansho iyaga badbaadiya aad kombuutarka la mid click.
Fiiro gaar ah: Macluumaadka laga helo nooc kasta oo ka mid ah kuwa la tirtiro dhawaan. Waxaad iyaga ku hubin kartaa adoo riixaya badhanka on sare ee suuqa kala ah: Kaliya bandhigaan waxyaabaha la tirtiro.
> Resource > Lugood > Sida loo kaabta iMessage in badan ku Computer aan Lugood